Tsy hita ny soritraretina fa misoko mangina: 23% ny tahan’ny aretina hépatite eto Madagasikara | NewsMada
Tsy hita ny soritraretina fa misoko mangina: 23% ny tahan’ny aretina hépatite eto Madagasikara
“70%-n’ny tranga hepatite B mamely ny aty izay mpiseho betsaka eto Madagasikara tsy ahitana soritraretina ety ivelany nefa mitondra ny tsimokaretina ilay olona”, araka ny fanazavan’ny profesora Ramanampamonjy Rado, tomponandraikitry ny unité gastro-entérologie, HJRB. 30% kosa miseho amin’ny ngorongosy (ictère na jaunisse) ary ny 0,1% efa tonga amin’ny homamiadan’ny aty mitarika amin’ny fahafatesana matetika.
Fiarovana mahomby indrindra ny fanaovana vaksiny raha mbola tsy voan’ny aretina hepatite ny olona iray. Misy ny vaksiny maimaimpoana atao ny zaza vao teraka rehetra isorohana ny aretina eny amin’ny CSB manerana ny Nosy. Atao intelo ny vaksiny dia voaaro tanteraka ilay zaza. Ho an’ireo efa nahazo ny tsimokaretina kosa, misy ny fitsaboana atao mandritra ny taona maro amin’ny fihinanana fanafody isan’andro. Azo fantarina amin’ny fitiliana ny ra na mitondra ny tsimokaretina heptatite B na tsia. Mifindra amin’ny alalan’ny ra, ny reny mitondra vohoka ary ny firaisana ara nofo ny tsimokaretina.
Any ambanivohitra 30,5% ny tahan’ny hépatite B
Eto amintsika, ho an’ny tanàn-dehibe, 5,4% ny tahan’ny olona mitondra ny tsimokaretina, any ambanivohitra, tafakatra hatramin’ny 30,5% ny tratran’ny aretina hépatite B. Any amin’ny toerana lavitra, tsy mazoto mitondra ny zanany atao vaksiny ny olona ary mbola ampiasaina betsaka any amin’ny mpanety volon-dehilahy ny areza tokana ho an’ny mpihety rehetra.
60 ka hatramin’ny 90%-n’ny tranga hépatite B sitrana amin’izao, 10 ka hatramin’ny 20% lasa manao hépatite mitarazoka mety hihafara amin’ny fahasimban’ny aty tanteraka mitranga amin’ny homamiadana ho an’ny 2 ka hatramin’ny 5%. Ho an’ny olona voan’ny aretina, ilaina ny miala sasatra tanteraka ary manajanona ny fanafody rehetra. Tsy azo atao mihitsy ny mihinana paracétamol, hoy ny fanazavana.
Ho an’ny hépatite mitarazoka, misy ny fanafody roa eto amintsika fa manodidina ny 50 000 Ar ny vidiny ho an’ny marary iray ary maharitra aman-taonany ny fitsaboana.
Nahena ny vidin’ny vaksiny fiarovana
Nanambara ny sampandraharahan’ny Firenena mikambana momba ny fahasalamana (OMS) fa olana ho an’ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ny aretina hépatite B satria 30,5% ny taha any ambanivohitra. Mandritra ny volana aogositra sy septambra izao, misy ny hetsika fampidinana ny vidin’ny vaksiny telo tsy maintsy atao hiarovana amin’ny tsimokaretina. Afaka manatona ny hopitaly, farmasia ireo rehetra hanao ny vaksiny.
Maneran-tany, 400 tapitrisa ny olona mitondra ny tsimokaretina ary ny 95% amin’izy ireo tsy mahalala akory ny toe-pahasalamany ary mamindra amin’ny hafa. 6 ka hatramin’ny 1 tapitrisa isan-taona ny tranga vaovao voatily. Hametraka sampandraharaha iray vaovao ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka hisahana ny ady amin’ny aretina hépatite satria tafiditra ao amin’ny firenena manana taha ambony isika eto Madagasikara, hoy ny tale jeneralin’ny minisitera, Andriamboavonjy Adrien. Nomarihina teny amin’ny HJRA, omaly ny andro maneran-tany iadiana amin’ny hepatite vokatry ny virus.